KIS, KAV 2009 Blacklist to Whitelist — MYSTERY ZILLION
KIS, KAV 2009 Blacklist to Whitelist
December 2008 edited December 2008 in Antivirus & Virus
program ကတော့ version7အတွက်ရေးထားပေမဲ့ ကျနော် version 8 နဲ့လုပ်ကြည့်တာရတယ်ဗျ။ ခေါင်းစဉ်ကတော့ KIV KAS 2009 အတွက်လို့တပ်ထားတာပဲ။ Star Lay program နဲ့ တူမတူတော့မသိဘူး။ forum တခုမှာတွေ့လို့တင်ပေးလိုက်တာ။
Blacklist proof key or solution for KIS 2009
Kaspersky Solution (Patch) - Kaspersky Internet Security 2009 [No BlackList]
Thats all. It's doesn't Matter that key is blacklist or white list.........Enjoy !!
Istein ရေ ကျေးဇူး ... Alexander က Kaspersky အချစ်တော်လေ ...
စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ် ... :67:
Thank :77: You
update ကောလုပ်လို့ ရလား / ရရင် ပြော ပြကြပါအုံးနော် ။ Kis7ကိုဖျက် ပြီး ပြောင်းမယ် :P
အွန်လိုင်းကနေ လုပ်တာတော့ အခုထိရနေသေးတယ်
hello Mr istein ..., how can I get the patch file ? now.., my kasper antivirus is being blasklist... i don't know how I do to be whitelist. So..., if you don't have any trouble.., please help me.., thanksalot for your sharing ..., wooer...,
wooer wrote: »
multi upload site နဲ့ အပေါ်မှာပြန်တင်ပေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ။
let me ask again if I face the problems.
Password နဲ့ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်နားမှန်းရေးထားမှန်းမသိလို့ပါ။ ကျွန်တော်ပဲညံ့လွန်းတာ ဖြစ်မှာပါ။
ရပါပြီခင်ဗျာ. Thanks ပဲနှိပ်အုံးမလို့ပဲနော်။ တော်ကြာအကြောင်းတောင် ပြန်မကြားဘူးထင်မှာစိုးလို့။ အခုလိုပြန်လိုက်တော့လဲ Forum အတွက် အပို ပို့စ်တွေများဖြစ်နေမလားလို့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာ.
ကိုကြီး Istein ရေ